Ukutya okusemgangathweni kweentlanzi ngohlobo lwentlanzi kunye ne-aquarium | Ngeentlanzi
IsiJamani sasePortillo | | Ihlaziywe 15/07/2021 14:39 | Izixhobo, Ukutya iintlanzi
Kungenzeka ukuba unayo i-aquarium kwaye awuqinisekanga ngento yokondla iintlanzi zakho. Kukho amawaka eentlobo ezahlukeneyo ze ukutya kwentlanzi. Ngamnye unezithako ezahlukeneyo kunye neempawu ezenza ukuba lube luncedo ngakumbi kuthotho lweentlobo kunezinye. Kule nqaku siza kunika iinkcukacha zokutya okusemgangathweni kweentlanzi kuxhomekeke kwiintlobo zeentlobo ezizithandayo.
Ukuba ufuna ukwazi ukondla iintlanzi zakho kakuhle, apha unokuzifumana zonke.
1 Ukutya iintlanzi kweGoldfish
2 Ukutya kwentlanzi uSera Flocken
3 Ukutya kweentlanzi zeSera
4 Ukutya kweTetramin kwintlanzi yetropiki
5 Ukutya iintlanzi echibini
6 UDajana Betta ukutya kwentlanzi
Ukutya iintlanzi kweGoldfish
Ukuba i-aquarium yakho ngamanzi abandayo, olu hlobo lokutya lolunye lwezona zilungileyo unokuzisebenzisa. Ixabiso elifanelekileyo lemali kwaye imbiza inkulu kakhulu. Zikhona ezinye iingqayi zokutya kweentlanzi eziza ngobukhulu obuncinci kwaye oku kwenza ukuba kubenzima ukubamba ukutya ukuze ukutyise iintlanzi. Kule meko, Ngokufumana eyona ingqayi yokutya inkulu, unokukhetha ngokulula ukutya kwentlanzi kwaye ubondle ngokungazami.
Iibhulukhwe zeTetra Goldfish -...
Ukutya kusekwe kwiiflakes, kungoko kungacolwa ngokulula kwaye kunganiki ngxaki yokwetyisa. Ukubunjwa kwezikali zendalo ngokupheleleyo. Ngaphandle kweekhemikhali. Oku kunika iintlanzi amandla aneleyo okuqubha ngaphandle kokuhlala kwaye zihluthi ixesha elide. Ngalesi kutya baya kukonwabela impilo entle kunye nombala omhle.
Ungalibali ukuba oku kutya kukhuthazwa kuphela kwiintlanzi ezibandayo zamanzi. Eyona ifanelekileyo luhlobo lweentlanzi zegolide. Ungayithenga ngokuchofoza apha.
Ukutya kwentlanzi uSera Flocken
Sera-Gcwalisa ukutya ...
Olu hlobo lokutya lwenzelwe abantu abane-aquarium eyahlukeneyo eneentlobo ezahlukeneyo. Ukuba uneentlobo ezahlukeneyo, oku kutya kusekwe kwiiflakes ezahlukahlukeneyo kuya kuza ngokufanelekileyo. Ngaphezulu kwako konke, kuya kuba luncedo olukhulu ukondla iintlanzi ezinamanzi ashushu, afuna ukutya okhethekileyo.
Xa uvula imbiza, uya kubona ukuba kukho iindidi ezine zesikali. Imibala nganye sisithako esahlukileyo. Oku kuluncedo kakhulu, kuba nge-jar enye yokutya, ungondla iintlobo ezahlukeneyo zeentlanzi eziya kutya iindidi ozithandayo.
Kuyacetyiswa kakhulu ngentlanzi eshushu kunye namanzi amatsha. Akucetyiswa ukuba iintlanzi zikolu hlobo lwamanzi kodwa zinkulu kakhulu ngobukhulu. Yithenge ngexabiso elihle apha.
Ukutya kweentlanzi zeSera
Apha sinolunye uhlobo lokutya kwentlanzi okusetyenziselwa ukwenza iintlanzi zakho zitye yonke into. Olukhetho olukhulu kuba ungadibanisa ukutya kunye neeflakes kunye nokutya okunegranulated. Olu hlobo lokutya lunoncedo olukhulu lokonwabisa iintlanzi ixesha elide. Ukongeza, ibonakalisa ngcono imeko yokutya kwimeko yayo yendalo, kuba kwindalo iintlanzi kufuneka zitye ngaloo ndlela.
Olu hlobo lunegranulate eyenziwe ngezinto ezahlukeneyo zokutya eziya kuqinisekisa ukuba iintlanzi zikwimeko entle. Kubalulekile ukuba unikeze ukutya okufanelekileyo kwintlanzi ukuze zikhusele naluphi na uhlobo lwesifo. Uninzi lwazo, ekubeni lungondlekanga kakuhle, luhlaselwa sisikhunta esithile, kudala izifo, ngamanye amaxesha nzulu kangangokuba zikhokelela ekufeni.
Ifomula yale mveliso ibonakala ngenxa yokuba inomxholo ophezulu wezimbiwa kunye neevithamini. Oku kuthetha ukuba inokuxutywa ngokugqibeleleyo kunye neecarbohydrate kunye neeproteni. Iipesenti zezithako zilungelelaniswe ukuze iintlanzi zibe nezakha mzimba zigutyungelwe kakuhle. AphaUngayithenga ngexabiso elifikelelekayo.
Ukutya kweTetramin kwintlanzi yetropiki
Ukuba iintlanzi zakho ziintlobo zeetropiki okanye ucinga ukuba ufuna ukuzithenga, kuya kufuneka wazi ukuba zikuluhlu lweentlanzi ekunzima ukuzinyamekela. Ke ngoko, ukutya kufuneka kube yinto ebalulekileyo yokugubungela kwaye kuya kufuneka unike okona kulungileyo ukuba ufuna i-aquarium ikhule kakuhle.
Ukutya yenye yezona ndlela zintle zokuloba iintlanzi. Isekwe kukungcamla okuhle kweentlanzi kwaye zikondla ngayo yonke into oyifunayo ukuze ube sempilweni kwaye womelele. Ezinye iimveliso zenza iintlanzi zibuthathaka, zilambe rhoqo, okanye zingasebenzi. Xa uqala ukondla iintlanzi zakho ngolu hlobo, ngokuqinisekileyo uya kubabona bonwaba ngakumbi kwaye besebenza ngakumbi.
Iintlanzi zingagula ngokulula xa ukutya okanye amanzi engekho kwimeko entle. Ukuthintela esi sifo, kungcono ukuthenga ukutya nge brand elungileyo. Olu hlobo linceda intlanzi ukuba ibenombala oqaqambe kakhulu, njengoko inazo zonke izondlo ukuze ibe sempilweni. Yithenge ngokucinezela Akukho mveliso ifunyenweyo.
Ukutya iintlanzi echibini
Uphawu lweTetra Pond Sticks brand lukulungele iintlanzi zamachibi. Ezi ntlanzi kufuneka zomelele kuba kufuneka zimelane nezona meko zisekuhleni ngaphandle. Ngesi sizathu, ukutya kufuneka kuzise zonke izondlo eziyimfuneko ukuze babe sempilweni ngokupheleleyo kwaye babe nawo onke amandla abawadingayo ukuze baphile kule meko inzima.
Ukuba ufuna ukuthenga. Kukutya okulula ukukunika. Into elungileyo ngolu hlobo kukuba iintlanzi ziyonwabisa ngelixa usitya. Kungenxa yokuba, xa uyigalela, iintlanzi zicinga ukuba zizinambuzane eziweleyo. Ke, azihambi nje ngqo ukuzitya, kodwa zitsalela umzingeli wazo wokuzimela ukuze zihlasele kwaye zihlasele.
I-Tetra Pond Sticks I-7 L -...
Kwelinye icala, inencasa elungileyo kunye nomgangatho. Le miba kufuneka ibe nentle ekutyeni kwentlanzi, ukuze ikhule kwaye ihlale isempilweni minyaka le. Ngaphandle kokutya okusemgangathweni, ixabiso liyafikeleleka. Oku kuyenza ibe yenye indlela ebhetele. Apha ungayithenga ngexabiso elihle.
UDajana Betta ukutya kwentlanzi
I-Tetra Betta 100 ml / 27 g
Olu hlobo lokutya, njengoko igama lisitsho, yinto esetyenziselwa ukondla iintlanzi ze-betta. Luhlobo lokutya olulungele zonke iintlobo zeentlanzi, kodwa ngakumbi ii-bettas, kuba zilungiselelwe zona. Ukuba uneentlobo ezahlukeneyo, abanye baya kukwazi nokukutya kakuhle oku kutya. Fumana enye apha.
Ndiyathemba ukuba ngezi ngcebiso unokuthenga ukutya okusempilweni kwentlanzi.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ngeentlanzi » Ukutya iintlanzi » Ukutya kwentlanzi